ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ - Katio
နေအိမ်> စက်မှုလုပ်ငန်းများ> ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ
Kaito International CO Ltd. သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ရခြင်းကိုဂုဏ်ယူသည်။ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အမြန်၊ တိကျမှုနှင့်တတ်နိုင်သောဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ကိရိယာများ၊ အပိုပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးလျှက်ရှိသည်။ အတင်းကျပ်ဆုံးလိုအပ်ချက်များနှင့်အပြင်းထန်ဆုံးအလှည့်အပြောင်းကာလများရှိသည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်မိမိတို့၏အမှာစာများသည်မှန်ကန်စွာ၊
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် CNC စက်လိုအပ်ပါတယ်
MRI နှင့်မှန် CT scan အစိတ်အပိုင်းများမှသည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာနှင့်အရိုးအထူးကု implants များအထိယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့စျေးကွက်တွင်ကွန်ပျူတာ၏အများဆုံးတိကျသောကွန်ပျူတာဂဏန်းထိန်းချုပ်မှု (CNC) စက်ကိုကျွမ်းကျင်စွာကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။ အမှားအယွင်းတစ်ခုအတွက်နေရာအချို့ထားရှိသည့်အခြားစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအမျိုးအစားများနှင့်မတူဘဲဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီအင်န်စီနင်းစက်ကသင့်အားအစိတ်အပိုင်းတိုင်းအတွက်အချိန်မှန်မှန်ရရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
CNC ၏အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုသည် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များ မှစ၍ ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့နှင့်လုပ်ကိုင်နေသောခေတ်မီပစ္စည်းများအများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုတော်လှန်ပြောင်းလဲခြင်းနည်းတူအလွန်ခေတ်မီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် CNC စက်ကိရိယာများကိုဆယ်စုနှစ်များစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုသည်ထင်ရှား၏။ Kaito Mold Works နှင့်သင်မှာယူသောအခါသင်သည်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများမှခေတ်မီစက်ကိရိယာများနှင့်အချိန်မီလုပ်ငန်းအသွားအလာအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ implants နှင့်အစိတ်အပိုင်းများသည်အလွန်သေးငယ်ပြီးအလွန်အသေးစိတ်ကျသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုအရည်အသွေးမြင့်တိကျသော micro-machining ဖြင့်ထောက်ပံ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့စီးပွားရေးလုပ်သည်။ ထို့အပြင် ISO 9001 နှင့် AS9100 အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကြာလုပ်ကြံခြင်းနှင့်စက်ပစ္စည်းအတွေ့အကြုံရှိခြင်းတို့ကြောင့် Kaito Mold Works သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းတိကျသောစက်ကိရိယာနှင့်ဆက်စပ်သည့်နည်းစနစ်များနှင့်နည်းပညာများကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းသတိထားနေရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီစတုရန်းပေ ၅,၀၀၀ ခန့်ရှိသောကမ္ဘာ့အဆင့်မီအဆောက်အအုံတစ်ခုရှိပြီးတရုတ်ပြည်၊ ဒေါဂွမ်၌ရှိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုအချိန်နှင့်ဘတ်ဂျက်တွင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာကတိများကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့အတွက်ထိရောက်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးပေးသည်။
We continue to grow with the industry because our clients know Kaito Mould Works isaname to be trusted. ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ today to learn more about what our facilities can do for you and your business.
နောက်တစ်ခု - လေကြောင်းနှင့်ကာကွယ်ရေး